Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Haweenka Ogaadeeniya oo si fiican looga xusay Nairobi
Maalinta Haweenka Ogaadeeniya oo si fiican looga xusay Nairobi
Ururka Midawga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeeniya (OYSU) ee Dalka Kenya ayaa waxay soo qaban qaabiyeen munaasabada 17,March 2012 taas oo loogu talo galay xusuusinta doorka Gabdhaha S.Ogaadeeniya ay ku leeyihiin halganka iyo dhaqanka dadkooda. Munaasabada oo lagu qabtay Hotel Gulf Place ee xaafad Soomaalidu degantahay ee Islii ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal haweeenka Soomaaliyeed iyo kuwa S.Ogaadeeniya isugu jira. Sidoo kale waxaa ka qayeb galay xubno ka tirsan Maamulka Jaaliyada Ogaadeeniya ee Kenya iyo Mas’uuliyiin JWXO oo uu kamid ahh Mudane Maxamed Shariif Cumar.
Xuskan loo qabtay gabdhaha S.Ogadenya maanta oo taariikhdu tahay 17ka March ayaa ahayed maalintii oogu horeysay ee munaasabad noocan oo kale ah oo lagu xusayo laguna qabto wadanka Kenya.
Munaasabada Xuska Maalita Haweenka Ogaadeniya ayaa guud ahaan dadweynihii ka qayeb galay ay hadheysay murugo iyo is xusuusin guud ahaan dhibaatada shacabka Ogaadeeniya lagu hayo gaar ahaan haweenka Ogaadeeniya oo meela kala duwan oo wadanka dhexdiisa ah xadgudubyo ay ugu gaystaan Askarta naxariista daran ee Gumaysiga madow ee Ethiopia.
Dadweynihii madasha joogay ayaa waxay aad ooga xanuunsadeen sawiro muujinaya dhibaatooyinka soo gaadhay haweenka Ogaadeeniya oo ay soo bandhigeen Ururka OYSU qayebtiisa Xaquuqul insaanka kuwaas oo isugu jiray dhaawacayo isugu jira Jidhdil, Gubid, Kusfi, iyo Dabid loo gaystay Gabdho reer Ogaadeniya ah.
Xoghayaha OYSU Kenya Xasan Macalin Carab ayaa ka warbixiyey u jeedada munaasabada wuxuuna yidhi; “OYSU waxay shirka u qabatay in hooyooyinka Ogaadeeniya ay dareensiiyaan waajibka saran.”
Sidoo kale Waxaa munaasabada Khudbadan ka jeediyey Mudane Maxamed Shariif Cumar. Waxaa ka mid ahaa hadaladiisa; “Dhibaatada haweenka iyo caruurta Ogaadeeniya soo gaadhay ma aha wax laga sheekayn karo waxayse u baadantahay qalbi iyo dareen wada socoda in lagaga hadlo ee ayna ahayn in ay munaasabada lagaag hadalayo lamid noqoto kuwa caadiga ah iyadoo ay horteena ka muuqdaan Sawiro naxdin leh kuwaas oo tilmaamaya sida guumaysigu uu u galo Haweenkeena”. Mudane Maxamed Shariif wax uu ku dheeraaday dhacadooyinka isdaba joog aha ee xanuunka iyo murugada badnaa iyo kufsiga maalin walba loo gaysto haweenka Ogaadeeniya waxaana mar kaliya isbadal jawigii shirka markii uu mudanuhu ka sheekeeyey Bishaan horaanteedii 17 gabdhood oo Ogaadeeniya lagu kufsaday iyo barakaca joogtada ah ee shacabka Ogaadeeniya lagu hayo.
Marwo Canab Muuse Fooley oo kamid ahayd Hooyooyinka Ogaadeeniya ayaa shirka ka jeedisay suugaan ay ku cabireyso dareenkeeda ku aadan xaaladaha Ogaadeeniya iyo waliba khayraadka Ogaadeeniya ee aduunku u hanqal taagayo.
Shirkan ayaa maanta waxaa ladhihi karaa wuxuu ahaa mid kagadisan shirarkii horay loo qaban jiray waxaana shirka hadheeyey dareen murugo leh maadaama gabdhaha ogaadeniya dhibaatada lagu hayo ee kufsiga, Dilka, jidhadilka iyo wax allaale iyo wixii ruux bini aadam ah xumeeya lagula kaco.
Gabdhaha ogaadeeniya ayaa waxaa masuuliyadi ka saarantahay inay badbaadiyaan,digaacaana sharaftooda wiilasha reer Ogaadeniya ee dunida dacaleeda.